Intonga yokumba i-Geological spiral ine-torque ephezulu yokusebenza, esetyenziswa ngeebhloko ezimbini zokujija okanye i-helical blade kabini. Yamkela intsimbi ekhethekileyo yejoloji kunye nendlela yokuwelda ephambili.
I-Gimarpol's Tapered Drill Rod enecandelo le-hexagonal chuck ukubonelela ngendawo yokujikeleza i-chuck bushing. Ihlala ine-collar eyenziweyo ukugcina indawo efanelekileyo yobuso e-shank kwi-drill rock, kunye ne-tapered bit drill ekugqibeleni. Ubude bentsimbi ye-Tapered bulinganiswa ukusuka kwikhola ukuya esiphelweni.
Iintonga zokugrumba ezisetyenzisiweyo zisetyenziswa ikakhulu emngxunyeni wokugrumba, umngxunya wokuqinisa, ukuqiniswa kwentaba, ukubambelela kunye neminye imingxunya yobunjineli kwimigodi, i-quarris, iindlela eziphakamileyo, iindlela zikaloliwe njalonjalo. Inobomi benkonzo ende. uxinzelelo oluphezulu lokuguqa, ukuhambisa amandla e-percussion ukusuka kwi-rock drill ukuya kwi-drill bit uze ungene elulwalweni.
I-Tapered Drill Rod ene-Gimarpol enecandelo le-hexagonal chuck ukubonelela ngendawo yokujikeleza i-chuck bushing. Ihlala ine-collar eyenziweyo ukugcina indawo efanelekileyo yobuso e-shank kwi-drill rock, kunye ne-tapered bit drill ekugqibeleni.
Iibhithi zokuqhuba zenziwe nge-alloy yebakala elukhuni kunye nentsimbi ekhethekileyo, ngokubanzi ifanelana ne-light-duty rock drill, ukubhola umngxuma werwala ngaphakathi kwe-50mm. Izixhobo zokugrumba zisetyenziswa kwimigodi yokunyibilikisa isinyithi, ukuhlola komhlaba, ulondolozo lwamanzi, umbane, ukugcwala kwabantu, itonela, ikwari, iprojekthi yelitye lokhuselo lesizwe njl.
Silandela umgaqo wolawulo we "Umgangatho ngowona mgangatho uphezulu, iNkampani yeyona nto iphambili, ubume bungowokuqala", kwaye siyakwenza ngokunyanisekileyo kwaye sabelane ngempumelelo kubo bonke abathengi beemveliso ezitsha ezishushu China 5/8 "-11 Thread Diamond Core Drill Bits for Stone (JL-DC5 / 8), sinamava angaphezulu kweminyaka engama-20 ngeli shishini ...
Sihlala sikholelwa ukuba isimilo sikabani sigqiba iimveliso 'ezikumgangatho ophezulu, iinkcukacha zigqiba iimveliso' ezigqwesileyo, NGOKWENYANISO, UKUSEBENZA KANYE NOKUQALA komoya wabasebenzi ngexabiso elicatshuliweyo laseChina Umbhobho oMiselweyo we-China, Samkela amathemba ngeenxa zonke kwigama ukusibizela ikamva elibonakalayo. unxibelelwano kumashishini amancinci. Iimveliso zethu kunye nezisombululo zezona zibalaseleyo. Nje ukuba ukhethwe, ulunge ngonaphakade!
Ngoku sinezixhobo eziphezulu. Izisombululo zethu zithunyelwa e-USA yakho, e-UK njalo njalo, ukonwabela igama elihle phakathi kwabathengi be-China Umthengisi wegolide wase-China Imayini ye-Yt28 Yt29A Air Hammer Rock Drill, Wamkelekile umbuzo wakho, eyona nkonzo isebenzayo iya kubonelelwa ngentliziyo epheleleyo.
Siyakholelwa ku: Ubuchule bomphefumlo nomoya wethu. Umgangatho bubomi bethu. Shopper need is our God for 2019 wholesale china China Hard Steel Button Button for Mining, Sizinikele ekunikezeleni ngetekhnoloji enezakhono zokuhlanjululwa kunye nezinto onokukhetha zona ngokwakho! Amaxabiso e-2019 e-wholesale i-China Drill Rig Drill Bit, i-Button Bit, Sinethemba lokusebenzisana nabathengi kwihlabathi liphela, ukuba ungathanda ukufumana ulwazi oluthe kratya, nceda unxibelelane nathi ngobubele, besikhangele phambili ekwakheni i-g .. .
Ukukhangela isixhobo esifanelekileyo kuyo yonke imisebenzi yokubamba ngesandla? Ukuzilolonga kwelitye likaGimarpol lolona khetho lwakho lubalaseleyo. Banikezela uyilo oluhlaziyiweyo, ukusetyenziswa komoya okuphantsi kwaye kulula ukusingatha. Ngala manqaku, unokuxhomekeka kwintsebenzo ephezulu, ukomelela kunye neendleko zokugcina eziphantsi.